गुगल सर्भको साथ लाइट बल्बमा स्क्रू गर्दै
lending8 मा जुन 18, 2014 द्वारा लिखित।
कत्ति गुगल कर्मचारीहरु लाई एक प्रकाश बल्ब मा पेच ले लिन्छ?
हामीलाई थाहा छैन। तर हामीलाई थाहा छैन कति Google कर्मचारीहरू हाम्रो नयाँ अनलाइन सामाजिक platformण प्लेटफर्मका लागि प्रयोगकर्ता अनुभवलाई माथि उठाउन लिन्छन्: पाँच।
हामी कसरी पहिलो स्थानमा हाम्रो अफिसमा पाँच गुगल कर्मचारीहरू पायौं? होईन, हामीले तिनीहरूलाई एक एमएएफ बसमा लोभ्याएर चलाएनौं। (हामीसँग त्यस्तो योजना बाहिर तान्न समय थिएन।) यसको सट्टा, हामी २०१ Google गुगल सर्भ घटनाको लागि पाँच आश्चर्यजनक कर्मचारीहरू होस्ट गर्ने सम्मान पाएका थियौं।
गुगलले तिनीहरूका कामदारहरूलाई सम्बन्ध बनाउन र समुदायमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्दछ जुन उनीहरू बस्छन् र काम गर्दछन्। गुगलले कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने धेरै विकल्पहरू मध्ये एक हो गुगलको सर्भको रूपमा चिनिने सेवाको दिन।
खाडी क्षेत्रको Google सर्भ स्थान मध्ये एक को रूपमा छनौट गर्न पर्याप्त भाग्यशाली संगठनहरू मध्ये एकको रूपमा, हामीले प्राविधिक सम्बन्धित आवश्यकताहरूको धुलाई सूची संकलन गर्न शुरू गर्यौं। पाँच व्यक्तिहरू हाम्रा सबै अनुरोधहरूको लागि समाधानहरू प्रदान गर्न सक्षम छैनन् भन्ने महसुस गर्दै हामीले यसलाई तल झारिदिए - हाम्रो नयाँको लागि अझ राम्रो प्रवाह सिर्जना गर्न मद्दत गर्दै Lending Circles नामांकन प्रक्रिया.
यो हामी केहि समयको लागि काम गरिरहेको मुद्दा भएको थियो, र हामीले महसुस गर्‍यौं कि केही ताजा आँखाहरू र अत्यधिक विश्लेषणात्मक दिमागले जवाफको लागि स्पष्ट दिशा दिन्छ।
त्यो बिहीबार बिहान हाम्रो स्टाफले हाम्रो आगमन आगन्तुकहरूको तातो आशमा कार्यालयको वरिपरि राख्यो। स्वयम्सेवकहरूले फिल्टर गर्न थाल्दा, हामी न्यानो, मित्रैलो मानिसहरूसँग भेट्यौं जुन हामीलाई भेट्न उत्साहित थिए र प्रोजेक्ट हाथैमा सुरु गर्न उत्साहित थिए। गुगल अफिसबाट स्यान्डविच भरिएको बक्सको साथ आइपुग्दै, एक्सल, वेन्जे, ड्यान, क्रिस र सुदर्शन स्टार्टअप वातावरणमा सहभागी हुन खुसी थिए।
सँगै, हामी हाम्रो सदस्यहरू र साझेदारहरू जब उनीहरूले हाम्रो कार्यक्रममा भाग लिन्छन् तब उनीहरूले राम्रो अनुभव सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छौं र हामी स्वयंसेवकहरूले त्यो प्रक्रिया अझ बढी सहज बनाउँन चाहन्छौं। हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातबाट समाप्त हुनको लागि सजिलो देखाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, र नामांकन प्रक्रिया पहिलो अन्तरक्रिया हुन्छ जुन सबैले एमएएफसँग गर्दछ।
तिनीहरू हाम्रो प्रक्रियाको प्रत्येक कोणमा इच्छुक थिए, सदस्यहरू चाहिन्छ, साझेदारहरू चाहिन्छ, नयाँ प्लेटफर्ममा पहुँच गर्ने तरिकाहरू ,समेत हामी आशा गर्छौं हाम्रा पार्टनरहरू र सदस्यहरूले नामांकन प्रक्रियामा पहुँचका लागि प्रयास गरिरहेका हुनेछन्। एक पटक उनीहरूले महत्वपूर्ण जानकारी स gathered्कलन गरेपछि, तिनीहरू काम गर्न सेट भए। दिउँसो सम्म, एमएएफ कर्मचारीहरू स्वयंसेवकहरूसँग खाजा खान बस्न बसे र उनीहरूको सबै परिश्रमको लागि धन्यवाद। हामी सबैले छलफल गरेका थियौं कि यसले हामीलाई हाम्रो सम्बन्धित कामप्रति यत्ति उत्साहित बनायो।
स्वयंसेवकहरू जस्तै, हामीसँग ज्ञानको तिर्खा थियो र टेक्नोलोजी मार्फत उत्तम विश्व सिर्जना गर्न ड्राइभ थियो।
स्वयंसेवकहरूले मिसनको बासिन्दाको रूपमा उनीहरूको अनुभवको बारेमा कुरा गरे, स्थानीय समुदायहरूको लागि उनीहरूको प्रशंसनीयता, र उनीहरूले उनीहरूको संस्कृति र चरित्रलाई उनीहरूले गरेको प्रेमको बारेमा छिमेकीलाई बताए। उनीहरूका लागि क्रेडिट भनेको उनीहरूले प्रायः सोच्ने कुरा नै थिएन, त्यसैले उनीहरूले सुनुवाइमा छन कि कसरी creditणको अभाव र उचित वित्तीय बजारमा पहुँचले मिसनमा परिवारहरूको फस्टाउनको क्षमतालाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ।
एक स्वयम्सेवकले अर्को अनुभव राज्यबाट बसाई आफ्नै अनुभव प्रस्ताव गरे र उनलाई क्रेडिट बनाउन कत्ति गाह्रो भयो। हामीले पनि एक प्राप्त गरेका छौं कसरी टि-शर्टहरू द्रुत रूपमा तह लगाउने बारे ट्यूटोरियल, डोरिसको लागि यो जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव थियो।
दिन बढ्दै जाँदा, हामी ह्वाइटबोर्डको क्रमशः शब्दहरू, रेखाहरू, संख्याहरू, र अनियमित स्क्रिबलहरूमा कभर हुने बित्तिकै हामी विस्मित भएका थियौं।
केहि घण्टा पछि, गुगल कर्मचारीहरूले नयाँ नामांकन प्रक्रियाको लागि हाम्रो लक्ष्य लिएका थिए र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न एक सरल, व्यावहारिक योजना राखेका थिए। हामीले हाम्रो Lending Circles कार्यक्रममा पहुँच बढाउनको लागि महत्वपूर्ण मुद्दाको समाधान खोज्नका साथै नवीन समाधानहरू सिर्जना गर्न नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्षम भएका छौं।
गुगल टोलीको माध्यमबाट हामीले केही प्रश्नहरू हेर्न, र नवीन समाधानहरू सिर्जना गर्न रचनात्मक नयाँ रणनीतिहरू सिकेका छौं। हामीले हाम्रो समुदायको स्वास्थ्यको लागि क्रेडिट र वित्तीय स्थिरताको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्‍यौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीसँग बस्न र सान्फ्रान्सिस्कोलाई माया गर्ने मन भएका मानिसहरू र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई भेट्ने हामीसँग समय भयो। थप, केहि स्टाफ सदस्यहरूले टी-शर्टलाई तह लगाउने अनौंठो तरिका सिके। यो चाखलाग्दो र आँखा खोल्ने अनुभव थियो, र हामी यसलाई फेरि एक मुटुको धडकन गर्छौं!
जोनाथन डिसूजा Mission Asset Fund मा मार्केटिंग मैनेजर हुन् र उनी मानिसहरूलाई buildingण निर्माणको महत्वको बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछन् जबकि उनीहरूलाई आफ्नो कुकुर फिनिक्सको धेरै फोटोहरू देखाउँदै। तपाईं उसलाई पुग्न सक्नुहुन्छ [email protected].